ခံစားချက်​ရဲ့အစွန်းနှစ်​ဖက်​ – Grab Love Story
ကျွန်​​တော်​သူနဲ့လက်​ထက်​ခဲ့ပြီးသုံနှစ်​အကြာမှာစခံစားမိတာကကပ်ကိုး ဆိုတဲ့ဖီလင်​နဲ့ဘူး (အထန်ကောင်)ဆိုတဲ့ခံစားချက်​​ပေါ့သူမနဲ့ကပ်ကိုး ခံစားပြီးအခြားသူနဲ့ဆိုဘူး (အထန်ကောင်)ကိုကြိုက်​နှစ်​သက်​လာတယ်​….အချိန်​က​တော့ရုံးကသူငယ်​ချင်းနဲ့လိင်ကိစ္စအ​ကြောင်း​ပြောမိတဲ့​နေကစပြီပါပဲ…
ကိုနိုင်​ဖြိုးလှတယ်​မလားအရမ်းလှတာ​ပေါ့ဖြိုးကိုကိုအရမ်းသ​ဘောကျတာဖြိုးကိုတို့အတူ​နေကြရ​အောင်​..တကယ်​လားကိုနိုင်​တကယ်​​ပေါ့ကို့နဲ့လိုက်​ခဲ့​နော်​စိတ်​ငြိမ်​ရာကို အင်း……….ဖြိုးကိုအရမ်းလိုးလို့​ကောင်းတယ်​ဖြိုးတယ်​ဖင်​​လေး​တွေတင်း​နေတာပဲ ကိုဖြိုးကိုလိုးရတာအရမ်းကြိုက်​တယ်​ဖြိုး​ရော..ဖြိုးလဲကိုနဲ့လိုးရတာ သ​ဘောကျတယ်​ …ကို့လီးကိုစုပ်​​ပေးအုံး ..အားအရမ်း​ကောင်းတယ်​..ကိုဖြိုးကိုယက်​​ပေးမယ်​…ဖြိုး ကြိုက်​လား ကြိုက်​တာ​ပေါ့ကိုနိုင်​ဖြိုးအရမ်းသ​ဘောကျတယ်​…
ကိုနိုင်​ဖြိုးအ​ခြေအ​နေ​လေဘယ်​လိုလဲကျွန်​​တော်​စလိမ်​ပါပြီနိုင်​လင်းကို သူစိတ်​ကစား​နေတာပါမင်းပြန်​ရမှာပါသူငယ်​ချင်​….အဲ့တာစိတ်​ကစားတာလားကိုနိုင်​သည်​မှာကြည့်​…ဟာမင်းမင်းသိ​နေတယ်​ ​အေးကိုနိုင်​မင်းနဲ့ဖြိုးဘာလိုထိဖြစ်​​နေတယ်​ငါသိတယ်​…sorry တကယ်​​တောင်းပန်​ပါတယ်​..ငါမှားပါတယ်​သူငယ်​ချင်းရာ
ဒီလိုကွာငါကကပ်ကိုးဆိုတဲ့ဖီးကသ​ဘောကျတာအဲ့တာကကို့​ဆော်​တာမှမဟုတ်​မိန်​မကိုတခြားသူနဲ့လိုးခံရတာကိုကြည့်​ချင်​မြင်​ချင်​တာ..ငါ့​ဆော်​ဖြိုးကအထန်မယား လို့​ခေါ်တယ်​ မင်းက​တော့သူနဲ့ငါ့အတွက်​ ဘူး (အထန်ကောင်) ဆိုတဲ့ကြားလူ​ပေါ့ ​နောက်​ထက်​မင်းမသိ​သေးတာက ဖြိုးမင်းနဲ့ငါသူငယ်​ချင်းဆိုတာသိတယ်​ အဲ့တာအပြင်​ မင်းမိန်းမနဲ့လည်းသူကသူငယ်​ချင်း​လေ ..ဘာ…ဖြိုးသိ​နေတယ်​ငါ့အ​ကြောင်း​တွေကို..​အေး..ကိုနိုင်​ မင်းဘယ်​လိုလဲဖြိုးကိုလိုးရတာသ​ဘောကျလား…သူဖင်​​တွေကိုချရတာသ​ဘောကျလား….ကျွန်​​တော်​​ယောင်​​ပြီး​ပြောလိုက်​တာက အင်းတစ်​လုံးတည်း​ပေါ….
နိုင်​လင်းဆက်​​ပြောတာက မင်းမိန်းမသီရိ ကိုမင်းဘယ်​​လောက်​ချစ်​လဲ သူတခြားသူနဲ့​ဖောက်​ပြန်​တာ မင်းလက်​ခံနိုင်​လား..​မေးရက်​တယ်​နိုင်​လင်းရယ်​ငါဘယ်​လက်​ခံနိုင်​မလဲ ..အဲ့တာဆိုသူအလိုကိုမင်းမဖြည့်​နိုင်​ရင်​ဘယ်​လိုလုပ်​မလဲ ကျွန်​​တော်​အရမ်း​တွေ​ဝေသွားခဲတယ်​ သူ​ပေးတဲ့အ​တွေးထဲမှာ……
သူဘယ်​​လောက်​ထန်​လဲ ဘယ်​​လောက်​ စိတ်​ကြီးလဲသိ​အောင်​လုပ်​​ပေါ့ မင်းလုပ်​မယ်​မလားကိုနိုင်​…
နိုင်​လင်းမင်း​ပြောသလိုငါ့မိန်းမလိုက်​လုပ်​ပြီးသူ့ကို့ပြစ်​မှားပြီးကြည့်​တဲ့အ​တွေခံချင်​​နေပြီဘာဆက်​လုပ်​ကမလဲနိုင်​လင်း ​မင်း​တော်​တယ်​ကိုနိုင်​မင်းလုပ်​နိုင်​တယ်​​လေးစားတယ်​ မင်းမိန်းမသီရိကိုအ​ရောင်​တင်​​ပေးနိုင်​လိုက်​ပြီ…သူ့ကို​နောက်​ထပ်​မင်းလိုးတိုင်း သူ့ကိုကြည့်​ပြီးလိုးချင်​တဲ့သူ​တွေ အ​နေနဲ့​ပြော​ပေးကြည့်​ ခံစားခိုင်းကြည့်​ ဟိတ်​​ကောင်​ဖြစ်​ပါ့မလားကွ လုပ်​ကြည့်​ပါဘာ​ပြောလဲသာပြန်​​ပြော..​အေးပါကွာမင်းကိုပဲဆရာတင်​ရမှာပဲ …မိန်းမသီရိ​နေ့လည့်​က ဘယ်​သူလိုက်​ကြည့်​​သေးလဲငါ့မိန်းမ​ချော​လေးကို……
ရုံးက​ကောင်​​လေး​လေသူကို့အကိုသိပါတယ်​သူနာမည်​က ​​ဇော်​​ဇော်​​လေ… ​အော်​​အေးသိတယ်​..သူလား
အကိုကြည့်​တာမှ အဝတ်​မရှိဘဲ ​နေ​နေသလိုကြည့်​တာ
ကျက်​သီး​တောင်​ထတယ်​ ကိုမြင်​ရင်​သဝန်​တို​နေမှာသိလား ကို့လီးကကြည့်​ပါအုံးအရမ်း​တောင်​​နေပြီ..​ဟော​တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလား​ စကား​ပြော​နေရင်း
လိုးလို့​ကောင်းလို်​က်​တာ အခုသီရိကို​ဇော်​​ဇော်​ လိုး​နေသိလားမိန်းမ ကိုကလဲ သီရိကို​ဇော်​နဲ့​ပေးလိုး​နေတာလား ​ဇော်​ဟုတ်​လား အဖျား​တောင်​စွတ်​ပြီးခံစား​နေတာလား မိုက်​တယ်​ကွာ သီရီ​ဇော်​လိုး​ပေးတာ​ကောင်းလား အရမ်း​ကောင်းတယ်​ အရမ်း​ကောင်းတယ်​ မသီရီ​ယောက်ျား ​အ​ရှေ့မှာ လိုး​ပေးမယ်​ မသီရီကို ဖင်​ပါလိုး​ပေးမယ်​ ….ကိုဘာ​တွေ​ပြော​နေတာလဲ သီရိအရမ်းရှက်​လာပြီ …အား..ကိုသီရိပြီး​တော့မယ်​ ကိုမြန်​မြန်​လိုး..လိုး​ပေး…..အား….
နိုင်​လင်းမင်း အရမ်း​​တော်​တယ်​ ငါ့မိန်းမသီရိ သူတခြားသုလိုးတာ ခံချင်​​နေပြီ ငါလဲအရမ်း ဖီးဖြစ်​တယ်​သူ့ကိုကြည့်​ပြီး …..ok.
​အေးပါနိုင်​လင်းရာ မင်းသီရိကို လိုးမလား.ငါကျိုးစားကြည့်​မယ်​ လိုးမှာ​ပေါ့ကိုနိုင်​ရ သီရိဖင်​လုံးက​တော်​​တော်​မိုက်​တာ …ok
သီရိ မိန်းမ မင်းနိုင်​လင်းကိုသိတယ်​မလား
သူမိန်းမကို လိုးချင်​​​နေတာအကို သတိထားမိတယ်​
ကို​နော်​ကို့မိန်းမကိုအဲ့လို​ပြောစရာလား…သီရိကလဲဟို​နေ့က​တောင်​​ဇော်​​ဇော်​ နဲ့ လိုးသလိုကိုလုပ်​​ပေးတာကြည့်​​လေ အရမ်း​ကောင်းတယ်​မလား..ကို​နော်​
​ချောပါတယ်​ အဲလို့​ချော​ချော​လေးကို စိတ်​မပါဘူးလား
ကိုမိန်းမကို နားလည်​​ပေးနိုင်​တယ်​​လေ ပိုလဲချစ်​တယ်​
သူကို​တွေ့ကြည့်​မလား…ကိုတကယ်​ကြီး​ပေး​နေမလို့လားသီရိကို သီရိကိုသူနဲ့​နေ​စေချင်​တာလားကိုက​ရော ကိုသီရိကိုပိုပြီး ခံ​စား​စေချင်​တယ်​ ပို​ပျော​​စေချင်​တယ်​ သ​ဘောတူလားကို​ပြောတာ …..
အင်းကို့သ​ဘော​လေ သူသီရိကိုအရမ်းလိုးရင်​ဘယ်​လိုလုပ်​မလဲ ကို​ပြောထားမယ်​​လေ စိတ်​ချ​နော်​
ဘယ်​​တော့လဲကို ..ဒီ​နေ့ညပဲလုပ်​လိုက်မယ်​ ….ဟယ်
ဒီည အင်းသီရိ ……
သီရိ နိုင်​လင်းလာပြီ တခုခု ဧည့်​ခံလိုက်​အုံးကို အပြင်​ထွက်​ပြီးလိုတာဝယ်​လိုက်​အုံးမယ်​ …ဟုတ်​ကိုနိုင်​ မြန်​မြန်​ပြန်​လာ​နော်​ ​အေးပါမိန်းမကလဲနိုင်​လင်းကမကိုက်​စားပါဘူး… မကိုက်​စားတာ​တော့သိတာ​ပေါ့အခုလာတဲ့အ​ကြောင်းကကိုက်​စားမှာထက်​ပို​ကြောက်​ဖိုး​ကောင်းတယ်​ သီရိကလဲ ပိုရင်​ခုန်​ဖို့​ကောင်းတာပါ….​ပြောတတ်​တဲ့ကိုလူ​ချောကို့မိန်းမကို တခြားသူကလိုးဖို့လာတာ ရင်​ခုန်​​နေတယ်​​ပေါ့… သွားသွားမြန်​မြန်​သွားပြီးပြန်​လာခဲ့ …ဟိုလူက​ရောက်​ထဲစား​တော့မဲ့မျက်​လုံးနဲ့ကြည့်​​နေတာအသည်းယားစရာကြီး….အမ​လေးကြက်​သီး​တောင်​ထတယ်​…
လိုအပ်​တာ​လေးသွားဝယ်​တာကိုနိုင်​လင်း ဟာ..သည်​​ကောင်​ကလဲ အားနားစရာကြီး…..အမ​လေး​လေးသူကအားနာတယ်​တဲ့ငါ့ကိုငါ့​ယောက်ျား​ရှေ့မှာလိုးဖိုလာတဲ့သူကများ ​ပြောတတ်​လိုက်​တာ ..အင်းပုံစံက​တော့မိုက်​သား​ဘော်​ဒီလဲ​တောင့်​မဲ့ပုံ လီးလဲကြီးမဲ့ထင်​တယ်​ကိုနိုင်​ထက်​ ငါ့ကိုငါ့လင်​မဟုတ်​ပဲ အလိုးပထမဆုံးခံရမဲ့သူက ငါ့​ရှေ့​တောင်​​ရောက်​​နေပါပြီလား…ရင်​ခုန်​လိုက်​တာ
သီရိ ညီမအရမ်းလှတယ်​သိလား ကိုယ်​လုံးကို​ပေါ်​စေတယ်​ သီရိဝတ်​လိုက်​တိုင်း ကိုဆိုအ​မြဲ​ပြော​နေကိကိုနိုင်​ကို ကိုလင်း​တော့​မြှောက်​​နေပါပြီ ဖြိုး​လောက်​မလှပါဘူး လှတာ​ပေါ့သီရိကလဲဖြိုးနဲ့အကွာကြီး ..သိရီကိုရလို့ကိုနိုင်​အရမ်းကံ​ကောင်းတယ်​လို့ရုံးမှာ​ပြောကြတယ်​လူတိူင်း ဟုတ်​လား တကယ်​ကြီးလားသီရိ​တော့​ခေါင်​တိုက်​​တော့မယ်​ထင်​တယ်​ ​မြောက်​ပြီး​လေ တကယ်​​ပြောတာသီရိကို​ယောက်ျားတိုင်းအခုရရင်​အခုယူမဲ့သူကြီးပဲ ပြီး​တော့ အနားကပ်​လာသီရိတိုးတိုး​လေး​ပြောမယ်​ သိရီကို ကို့တို့တစ်​ရုံးလုံးမလိုးချင်​တဲ့သူမရှိဘူး အဲ့တာသီရီ​ယျေ်ား​အသိဆုံးပ.ဲ .ရှင်​..
ဘာ​တွေလာ​ပြော​နေလဲမသိဘူး….တစ်​ရုံးလုံးက​ယောက်ျား​လေး​တွေလား.. ဟုတ်​တယ်​သီရိ ….
အခု​တောင်​သီရိကိုကိုအရမ်းလိုးချင်​​နေပြီ ဟို​ကောင်​ကသူ့​ရှေ့ မှာစလိုး​ပေးဖို့​ပြောထားလို​လေ…
ကိုနိုင်​ကသီရိကို ဘာလို့ကိုနိုင်​လင်းနဲ့ လိုးခိုင်းချင်​တာလဲအကို….သူသီရိကိုချစ်​လို့​ပေါ့ …ဟင်​..ကိုနိုင်​လင်း​ရောဖြိုးကို အဲ့လိုအလိုးခံခိုင်းမှာလား …ဖြိုးကိုတစိမ်းလူ​တွေနဲ့လိုးခိုင်းမှာလား… သီရိ​ပြောတာ​တောင်​​နောက်​ကျ​နေပြီဖြိုးအခုဆိုကိုတို့ရုံးကလူ​တွေနဲ့ အလိုးမခံဘူးတဲ့သူမရှိဘူး….တကယ်​ကိုနိုင်​လဲပါတယ်​လာ…အဟုတ်​​ပေါ့…ကျန်​ကျန်​သူကအပြင်​မှာဖြိုးကို​တောင်​လိုးပြီး​နေပြီ…​ဟော​ပြောရင်းသူပြန်​လာပြီတကယ်​ကြီးငါသူများအလိုးခံရ​တော့မှာပါလား…
​သောက်​စားကြပြီးည​နေ​စောင်းက​နေ​မှောင်​စပြိုး​လာ​တော့ အိမ်​တခါး​တွေကိုနိုင်​လိုက်​ပိတ်​လိုက်​ကာ ကျွန်​​တော့မိန်းမအလိုးခံဖို့ ပြင်​ဆင်​လို့စိတ်​ထဲဖီးအရမ်းဖြစ်​​နေသည်​​ပေါ့ဗျာ ကျွန်​​တော်​မိန့်းမကိုနိုင်​လင်းစပြီးနမ်းလိုက်​ပြီး သိရီမျက်​လုံး​လေး​မှေးပြီးစင်းလာပြီ လက်​​တွေက
သီရိအဝတ်​​တွေစပြီး ခွာချ​နေလိုက်​တာ ​အောကားကြည့်​ရတာထက်​ ပိုပြီးဖီးဖြစ်​မိတယ်​ သီရိမျက်​လုံး​တွေကျွန်​​တော့စီ ရုတ်​တရက်​​ရောက်​လာပါလား သူမျက်​လုံးအကြည့်​မျိုး ကတနှာစိတ်​​တွေပြည့်​​နေပြီလို့ခံစားရတယ်​ သူကျွန်​​တော့ကိုကြည့်​ပြီး သူဖီးတတ်​​နေတာ သူ့ကိုစလို့တဲ့ညကလိုပါပဲလား နိုင်​လင်း နို့စို့ရင်းက​အောက်​ကိုတ​ဖြေး​ဖြေးဆင်းလာပြီးသီရိ ရဲ ရတနာ​လေးကိုယက်​​ပေးလိုက်​သည်​ သီရိ သီရိအခု​တော့ငါနင့်​ကိုလိုးရ​တော့မှာပါလား… နင်​ငါလိုးတာခံရ​တော့မှာပါလား အရင်​က​တော့မင်း​လောက်​တည်​ငြိမ်​တဲ့သူမရှိသလိုနဲ့အခု​တော့နင့်​လင်​​ရှေ့​မှာတင်​နင်​အလိုးခံ​နေပြီနင်​ကို​သေလိုးပြစ်​မယ်​ နင့်​ကိုလိုးဖို့ငါကြိုတင်​ပြီး​ဂေါ်လီ​တွေအချိန်​​ပေးထည့်​ထားတာသုံးနှစ်​ရှိပြီနင်​ကိုနိုင်​နဲ့ယူတဲ့​နေထဲက​လေ… …..အားအား သီရိကိုလိုး​ပေးပါ​တော့​နော်​ကိုနိုင်​​ရှေ့မှာလို​ပေးပါ​တော့​ကိုနိုင်​လင်းသီရိမ​နေနိုင်​​တော့ဘူးနာ်​ ..အင်းပါသီရိရယ်​အခုလိုး​ပေးမယ်​…. ကိုလီးကိုကြည့်​ပါအုံး…အမ​လေးအကြီးကြီးပါလားအဖုအထစ်​​တွေနဲ့ ​သေ​တော့မှာပဲ…. မ​သေပါဘူးသီရိရယ်​နတ်​ပြည်​​ရောက်​သွားမှာပါ
နိုင်​လင်းသီရိကိုလိုး​နေပြီ လိုး​နေပြီ ​ဆောင့်​ချက်​​တွေကလဲပြင်းလိုက်​တာသီရိ​ကော့​နေတာပဲ…..
သီရိအရမ်း​ကောင်း​နေပြီ …မိုက်​တယ်​ကွာ…သီရိကိုတစိမ်းလူလိုး​နေပြီငါ့​ရှေ့မှာတင်​ အခုကြ​တော့လဲခံ​နေလိုက်​​တာ ​ကော့ပျံ​နေတာပဲ အရင်​ကသီရိမှဟုတ်​ရဲ့လား​တောင်​ထင်​ရတယ်​ ​ဟောကုန်းပြီးစုပ်​​နေပြီဟို​ကောင့်​လီးကို အငမ်းမရပါလား ​တော်​​တော်​ ထန်​​နေပြီ ငါ့လီးလဲအရမ်း​တောင်​ပြီးထုလို့်​​ကောင်း​နေပါလား
ရမ်း​နေတာပဲ သူကလဲပြန်​​ဆောင့်​တယ်​ဟ ​တော်​​တော်​နှာကြီးပါလားသီရိတယ်​အခု​တော့နင့်​စိတ်​​တွေ ပြလိုက်​ပြီ​ပေါ့ ….သီရိ​ရေနင့်​လင်​ကြည့်​ပါအုံးနင်​အလိုးခံ​နေတာကြည့်​ပြီးဖီးအရမ်းတတ်​​နေပြီ ပါးစပ်​ကလတတွတ်​တွတ်​နဲ့ဘာ​တွေ​ပြော​နေလဲ မသိဘူး..နင့်​ဖင်​ကြီး​တွေလိုးလို့အရမ်း​ကောင်းတယ်​ဟာ …နင့်​ကိုကိုနိုင်​ဖင်​လိုးလား .. မလိုးဘူးဘူးကိုနိုင်​လင်း..
မရဘူးနင့်​လင်​ကို​ပြောပြီးသား ငါလိုးရင်​ဖင်​ပါလိုးတတိတာ ကိုနိုင်​လင်းသီရိပြီး​တော့မယ်​…မြန်​မြန်​..အမ​လေး​ကောင်းလိုက်​တာ ဘယ်​လို​ကောင်းမှန်းမသိဘူး.ပြီးပြီပြီးပြီ….ဟင်း…..သီရိပြီးပြီဆိုကို့အလှည့်​​နော်​ …​တေ.ွမယ်​ဖင်​​ကောင်းတဲ့သီရိဖင်​ကိုလိုးပြစ်​မယ်​
ကိုနိုင်​လင်းဘာလို့ထုတ်​လိုက်​တာလဲ မလိုး​တော့ဘူးလား …မဟုတ်​ဘူးသီရိဖင်​​ပြောင်းလိုးမလို့ …ဟင်​..
ကိုနိုင်​ သီရိကိုဖင်​လိုးမလို့တဲ့ကိုနိုင်​​တောင်​မလိုးဘူးသီရိနာမှာဆိူးလို့ ကိုနိုင်​မ​ပြော​တော့ဘူးလား…..
​တွေ့တယ်​​နော်​သီရိ​လေး နင့်​လင်​သ​ဘောတူပြီးသားသူမလိုးရ​သေးနဲ့ ​ဟောက ဖင်​​ပေါက်​​လေးကို ကိုအရင်​လိုးပြီးပါကင်​ဖွင့်​​ပေးမယ်​ သီရိဖင်​ကို​တွေ့တိုင်းဖင်းလိုးမယ်​လို့စိတ်​ကူးထားတာသိရဲ့လား အခုဖင်​ကိုဂျယ်​လိမ်း​ပေးမယ်​ သီရိမနာ​အောင်​ …များများလိမ်း​ပေးကိုနိုင်​လင်း ရပြီးအသက်​ကိုပုံမှန်​ရှုပြီးစအိုဖွင့်​ထားသီရိ ထည့်​​တော့မယ်​ … နိုင်​လင်းခန​လေးခန​လေး ဘာလဲကွ
ငါ​တေ့​ပေးချင်​လို့ပါကွ ….ဝိုးမိုက်​ချက်​ပဲ​ဟေ့​တွေ့လားနင့်​လင်​ကိုတိုင်​နင့်​ဖင်​လိုးဖို့ တည့်​​ပေးချင်​​နေတာ ရပြီထည်​လိုက်​​တော့ ….အား….နာတယ်​ ​ခေါင်းဝင်​​နေပြီမိန်းမ ရ​တော့မယ်​​တောင့်​.ထား
အား…​ကောင်းတယ်​ကွာမင်းမိန်းမဖင်​ကကြတ်​နေတာပဲ ok ရသွားပြီ အားလုံးဝင်​သွားပြီမိန်းမ ​အော်​ကိုနိုင်​သူကိုတိုင်​ ကျွန်​မဖင်​ခံဖို့​တေ့​ပေးပြီး ခံခိုင်း​နေတာပါလား အဝင်​အထွက်​လုပ်​​နေပြီ တမျိုးပဲနာလဲနာတယ်​
​ကောင်းလဲ​ကောင်း သလိုပဲ..သီရိ​ရေငါနင့်​ဖင်​ကိုလိုးရပြီဟ. နင့်​ဖင်​ကိုမှန်းရကျိုးနပ်​ပြီ ​ကောင်း​တယ်​ …
အ​မ​လေး ​ကောင်းလိုက်​တာ ဖင်​ခံတယ်​ဆိုတာ
ကိုနိုင်​လင်းလိုး ကြမ်းကြမ်းလိုး ငါ့မိန်းမသီရိဖင်​ကိုကြမ်းကြမ်းသာလိုး သူခံနိုင်​​နေပြီ လိုးမှာလိုး​ပေးမှာ ကိုနိုင်းမင်း​ရှေ့ကသွားလီစုပ်​ခိုင်း ပြီကြည်​.့….
သီရိလိုတည်​ကြည်​ပြီ အပြစ်​ကင်းစင်​တဲ့ရုပ်​က​လေးကအခု​တော့ တနှာခိုး​တွေပြည့်​ပြီးဖင်​အလိုးခံ​နေလိုက်​တာ
​ဘေးအိမ်​က အထန်းသမားအငယ်​​လေး​ချောင်းကြည်​ဘပြီးအံဩ​နေပါ​တော့တယ်​…အလိုးခံလိုက်​ရတာများမနက်​မိုးလင်းတဲ့ထိနိုင်​လင်းနဲ့သူ့လင်​ကိုနိုင်​သီရိကို တနှာကြီး​သောမိန်းမအဖြစ်​လမ်း​ဖောက်​​ပေးလိုက်​ပါ​တော့သည်
အိပ်မက်နတ်သိုင်းကျမ်း နှင့် လှကလျာ